वृद्ध एमएस कार्यालय संस्करणहरूको लागि कसरी उत्पाद कुञ्जीहरू फेला पार्नुहोस्
विन्डोज स्थापना र अपग्रेड गर्दै
Microsoft Office 2003, XP, 2000 र 97 को लागि हराएको उत्पाद कुञ्जीहरू फेला पार्नुहोस्
उत्पादन कुञ्जी हराउनु आम हो, तर ईमानदार हुनुहोस्, यो सबै समय पछि हराएको ग्यारेन्टी हो , विचार गर्नुहोस् कति पटक पहिले Microsoft Office को संस्करणहरू लोकप्रिय थिए।
कार्यालय91 993मा राम्रो 'खातिरको लागि आउनुभयो! यहां सम्म कि नयाँ संस्करण मा म यस ट्यूटोरियल को बारे मा कुरा गर्दछ, माइक्रोसफ्ट कार्यालय 2003, बाहिर आयो - तपाईंले अनुमान गरे - 2003. त्यो एक लामो समय पहिले थियो ।
त्यसैले, यहाँ कुनै निर्णय छैन। पुराना चीजहरू हराउँछन्। सौभाग्य देखि, कार्यालय को यो पुरानो संस्करण को लागी लामो समय सम्म स्थापित भएको छ, वा कम से कम हाल नै थियो, तपाईं भाग्य मा हुन सक्छ।
Office of these versions all their product keys लाई Windows रजिस्ट्री मा एक विशिष्ट रजिस्ट्री कुंजी मा संग्रहीत। भण्डारण गरिएको उत्पाद कुञ्जी एन्क्रिप्टेड छ, तर एक कुञ्जी खोजीकर्ता प्रोग्रामले यो समस्यालाई सम्भाल्न सक्छ, तपाईलाई वास्तविक कुञ्जी जसलाई तपाइँले पुन: स्थापना रद्द गर्न सक्नुहुनेछ।
नोट: यो प्रक्रियाले विभिन्न Microsoft Office 2003 , XP , 2000 , वा 97 सुइट संस्करणहरूको साथ काम गर्दछ, साथै तपाईंसँग मात्र एक वा केहि सूट कार्यक्रमहरू जस्तै Word , PowerPoint , आदि स्थापना भएको छ।
तपाईंको कार्यालय 2003, XP, 2000, वा 97 उत्पादन कुञ्जी कसरी खोज्न सकिन्छ
Keyfinder कुरा डाउनलोड गर्नुहोस् । यो नि: शुल्क कार्यक्रम हो जुन स्वचालित रूपमा पत्ता लगाउँदछ, र अस्वीकार गर्दछ, उत्पादन कुञ्जीको कार्यालयको तपाईंको पुरानो संस्करणमा।
नोट: धेरै नि : शुल्क कुञ्जी खोजकर्ता प्रोग्रामहरूले उत्पाद कुञ्जी को यी कुनै पनि पुरानो संस्करणहरूमा फेला पार्नेछ, तर मैले पत्ता लगाइयो कि सबै भन्दा ठोस। साथै, यो प्रयोग गर्न धेरै सजिलो छ, मैले भर्खरै जोडिएको सूचीमा अन्य केहि भन्दा सजिलो छ।
तपाईँले स्थापना गर्न जिप फाईल खोल्नुहोस् र त्यसपछि स्थापना सुरु गर्नको लागि KeyFinderThing.exe ( संग्रहमा यो एक मात्र एक नाम फाइल) चलाउनुहोस् ।
स्थापनाको माध्यमबाट हिंड्नुहोस्, अर्को बेला क्लिक गर्नु पर्दछ जब आवश्यक पर्दछ र इजाजतपत्र सम्झौता स्वीकार गर्नुहोस्। यदि तपाईले विकल्प दिनुभएको हो भने कस्टम स्थापना (उन्नत) छनौट गर्न निश्चित हुनुहोस्, किन्फिन्डर थिंगको साथमा आउने सबै अतिरिक्त, अनावश्यक सामानहरू हटाउने।
स्थापना भएपछि एक पटक कीफिन्डर चीज सुरू गर्न छनौट गर्नुहोस् र त्यसपछि कुनै पनि पुष्टिकरण संकेतहरू स्वीकार गर्नुहोस् जुन पप अप हुन सक्छ यदि तपाईं पक्का हुनुहुन्छ कि तपाइँ कार्यक्रम सुरु गर्न चाहनुहुन्छ भने।
किफिल्डर थाइले रजिस्ट्री स्क्यान गर्दा पर्खनुहोस्, माइक्रोसफ्ट अफिसको तपाइँको संस्करणको लागि उत्पाद कुञ्जी पत्ता लगाउँदछ र त्यसपछि ती ती कुञ्जीहरू तपाईंलाई देखाउँछ।
तपाईंको Microsoft Office उत्पाद कुञ्जी स्पष्ट रूपमा सूचीबद्ध गरिनेछ र 25 वर्ण लामो हुनेछ।
अर्को उत्पादन कुञ्जी रेकर्ड गर्नुहोस् जहाँ तपाइँ यसलाई फेरि गुमाउनु हुँदैन। तपाईं फाइल> निर्यात कुञ्जीहरू> पाठ फाइल मेनु विकल्प प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ कि सबै भन्दा राम्रो ब्याकअपको लागि TXT फाइलमा कुञ्जी बचत गर्न, तर त्यहाँ HTML फाइलमा MS Office कुञ्जी सुरक्षित गर्न विकल्प पनि छ। अर्को विकल्प एक उत्पाद कुञ्जी सुरक्षित पासवर्ड प्रबन्धक प्रोग्राममा प्रतिलिपि गर्न हो त्यसैले तपाईलाई सम्झना छ कि यो कहाँ छ।
सुझावहरू & amp; थप जानकारी
यदि कीफिन्डर चीले काम गरेन भने, सबै माध्यमद्वारा अर्को फ्री कुञ्जी सर्भर कार्यक्रम प्रयास गर्नुहोस्। यी प्रोग्रामहरू नियमित आधारमा परिवर्तन र अद्यावधिक गर्नुहोस्, र विचार गर्नुहोस् कि यी कार्यालय संस्करणहरू कति पुरानो हो, समर्थन छोड्न सकिन्छ।
त्यस भन्दा अन्य, तथापि, तपाई माइक्रोसफ्ट अफिसको ब्रान्ड नयाँ प्रतिलिपि किन्न छोड्नु भएको छ। तपाईलाई कुनै पनि शङ्का छैन कार्यालयको नयाँ संस्करण छान्नको लागि किनकि तपाईको पुरानो संस्करण अब उपलब्ध छैन।
Amazon मा Microsoft Office किन्नुहोस्
साथै, अरूको बारेमा पढ्दा उनीहरूको हुन सक्छ जब प्रलोभनको रूपमा, कृपया केहि वेबसाइटहरूमा फेला पार्न नि: शुल्क अफिस स्थापना कुञ्जी प्रयोग नगर्नुहोस्, वा ती मालवेयर स्ट्राइक कुञ्जी जेनेरेटर उपकरणहरू मध्ये एउटा डाउनलोड गर्नुहोस् । दुबै विकल्पहरू अवैध छन्।
Microsoft Office को नयाँ संस्करण
माथिको प्रक्रियाले माइक्रोसफ्ट अफिस 2010 वा 2007 को लागि राम्रो काम गर्नु पर्दछ, त्यहाँ अर्को काम भनेको राम्रो काम गर्छ।
हेर्नुहोस् कि कसरी तपाइँको माइक्रोसफ्ट अफिस 2010 वा 2007 उत्पादन कुञ्जी ट्यूटोरियलको लागि पत्ता लगाउनुहोस् ।
माइक्रोसफ्ट अफिस 2016 र 2013 फरक जनावरहरू पूर्ण रूपमा छन्। माइक्रोसफ्ट अफिस कार्यालय 2013 से 2013 मा सुरू हुने रजिस्ट्रीमा सम्पूर्ण Office उत्पाद कुञ्जीलाई भण्डारण गर्न छोडेर Office 2016 वा 2013 को हराएको उत्पादन कुञ्जीलाई अझ बढी चुनौतीपूर्ण बनाइएको छ।
त्यसो गर्न मद्दतको लागि तपाईको Microsoft Office 2016 वा 2013 उत्पाद कुञ्जी कसरी पत्ता लगाउनुहोस् ।
विन्डोज संस्करण संख्याहरू
Ninite: यो के छ र यो कसरि प्रयोग गर्ने
तपाईंको माइक्रोसफ्ट अफिस 2016 वा 2013 उत्पादन कुञ्जी कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ
कसरी विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम स्थापना गर्ने
विन्डोज 10 मा अपग्रेड गर्न कारणहरू
कसरी Windows7स्थापना गर्न USB बाट
कसरी सफा गर्ने Windows 8 प्रो अपग्रेड
15 सामान्य प्रश्नहरू एक पीसीमा विन्डोज स्थापना गर्ने बारे
म कसरी मेरो इन्टरनेट डाउनलोड प्रबन्धक सीरियल नम्बर फेला पार्छु?
11 तपाईंको कम्प्यूटर कूल राख्ने तरिका
आईफोन सर्भेसनको लागि याहू मौसम अनुप्रयोग
7 अनलाइन अनलाइन प्राप्त गर्न धेरै फरक तरिका
2018 मा एक टिभी अनलाईनमा 8 उत्कृष्ट स्थानहरू
आमा समीक्षाको एडवेंचर्स - तेस्रो समयको आकर्षण
Linux, Mac र Windows को लागि फायरफक्समा निजी ब्राउजिङ कसरी सक्षम पार्ने
एक्सेल 2007 मा संवाद बाकस र संवाद बाक लन्चर
तपाईंको आईफोन एक मूवी क्यामेरामा बदल्नुहोस्!
आउटलुकको साथ macOS सम्पर्क कसरी प्रयोग गर्ने
बेस्ट ध्वनि हेज हग गेम एन्ड्रोइडका लागि
तपाईंको आईफोनको सिरी सहायक कसरी सुरक्षित गर्ने
आईप्याडको सेटिङ् कसरी खोल्न
शब्दमा विशेष वर्ण र प्रतीकहरू कसरी प्रयोग गर्ने
डेटा नियन्त्रण भाषा (डीसीएल)
79सर्वोत्तम स्मार्ट वाशर / ड्रायरहरू 2018 मा खरीद गर्नका लागि
कसरी सफारी प्लग इनहरू हेर्नुहोस्, प्रबन्ध गर्नुहोस्, वा हटाउनुहोस्
पासवर्ड नीति: न्यूनतम पासवर्ड उमेर
विन्डोजको लागि शीर्ष वेब ग्राफिक प्रोग्राम
10 सर्वोत्तम पुरस्कार र नगद फिर्ता खरीदारी साइटहरु
डिजाइनरको रूपमा रिटेनरमा काम गर्दै
वलडाइन वाई-क्यू 12-इन्च सबवाउटर माप